I-roulette yencoko yesiRashiya
Umthombo yindlela efanelekileyo yokunxibelelana, unxibelelwano nasiphi na isihloko esingadingi ukubhaliswa kwangaphambili.Abantu abaninzi baqhele ukuqhagamshelana neengxoxo ezinjalo ukuze bafumane iimpendulo kwimibuzo ebalulekileyo, njl.Bonke abasebenzisi baneeprofayili zabo kunye neefoto, ulwazi malunga nabo kunye neenkcukacha zabo zoqhagamshelwano, ngoko isayithi ikhuselekile ngokupheleleyo kwaye isebenzisa izixhobo ezifihliweyo zamva nje, ukuze kungabikho umnini weprofayili onokufumana imbalelwano yakho.
I-Chat Roulette ineempawu ezimbini eziphambili: ii-monologues kunye neevidiyo.
I-Monologues yinxalenye yombhalo wengxoxo yevidiyo, apho awukwazi ukuthetha kuphela nomntu othetha naye, kodwa uphinde umbuze imibuzo okanye ubeke izimvo kwiimpendulo zakhe.
Ngexesha lencoko yevidiyo, ividiyo engenamagama inokuba nemifanekiso ebonisa unxibelelwano lwakho lwenyani.
Ukuba ufuna nje ukuthetha, kufuneka ubonise idatha yakho kwizimvo, bonisa ukuba yeyiphi incoko oyithandayo kwaye ukhethe enye ye-interlocutors yonxibelelwano.
Ngexesha leeyure ezingasebenziyo kwiphepha laseKhaya, unokubukela iividiyo ngaphandle kokuphazamiseka kwinkqubo ngokwayo.
Xa omnye umntu ephendula umbuzo wakho, ufunda umbhalo ovela ezantsi kwesikrini.
Ungayithulisa incoko kwaye ufunde okanye uphendule umyalezo wakho.
Lonke unxibelelwano lwenzeka ngesiRashiya.
Zimbini iindidi zonxibelelwano – ukuphawula kunye nonxibelelwano oluthe ngqo.Kukho ushicilelo oluvakalayo lokuphawula, kuphela unxibelelwano lwevidiyo olukhoyo kunxibelelwano oluthe ngqo.Rhoqo ngemizuzu emi-5 kulo lonke ilizwe kukho uhlaziyo lwengxoxo yevidiyo- oku kuthetha ukuba unabangeneleli abatsha.I-interlocutor yakho inokufunda impendulo yakho kwaye iqhubeke nencoko.Ukuba ufuna ukuba umntu ofanayo avele ngamaxesha athile njenge-interlocutor, ngoko kufuneka wenze oku kulandelayo:
Yiya kwicandelo le-ChatRoulette (libekwe kwimenyu ephezulu ngasekhohlo) kwaye ukhethe icandelo elithi "Ingxoxo yevidiyo".
Cofa kwiqhosha elithi "Qala Incoko" ukuze ubukele usasazo lwevidiyo.
Xa ujoyina i-Chat Roulette, uba lilungu lephepha eliphambili lesayithi ngesiRashiya kwaye ukhethe enye ye-interlocutors ekhoyo.
Emva kokukhetha i-interlocutor, ungaqala ukuncokola naye.Emva kwempendulo ye-interlocutor yakho, uya kubona ithebhu yakhe ethi "Amagqabantshintshi".Apho ungabhala into uze uyithumele kuye.Ukuba ividiyo irekhodwe kunye ne-interlocutor yakho, iya kuboniswa
I-Chat Roulette yincoko yevidiyo ethandwayo yolwimi lwaseRashiya, etyelelwa yonke imihla ngabasebenzisi abaninzi abavela eRashiya nakumazwe eCIS.Yi-analogue yeephothali zolwimi lwesiNgesi ezaziwa kakhulu, ezidume kakhulu phakathi kwabantu abavela kumazwe ahlukeneyo ehlabathi.Ngoncedo lwe-roulette yevidiyo yaseRashiya, ene-interface elula, enembile, unokonwabela unxibelelwano olumnandi lwe-intanethi, kunye nokwenza umdla omtsha, kwaye uhlala uluncedo, abantu obaziyo nge-Intanethi.Awuyi kuba nobunzima bolwimi kwinkqubo yonxibelelwano, kuba uninzi lwabasebenzisi bengxoxo yevidiyo yaseRashiya bathetha isiRashiya.
Inkonzo yethu ivulelekile kubo bonke abantu abafuna abantu abatsha obaziyo abanomdla.Ngoku ufuna izinto ezintathu kuphela kule nto: ikhamera yewebhu, imakrofoni kunye nomoya omhle.I-Chatroulette sele ifumene ukuthandwa: abantu abangaphezu kwezigidi ezibini babhalisiwe ngokupheleleyo, kwaye isiseko somsebenzisi sizaliswa ngabantu abayi-3,000 imihla ngemihla.I-Chat-Ruletka.com isebenza kumgaqo wokuthandana ngokungaqhelekanga.Uvula ikhamera, cinezela "Qala" kwaye inkqubo ikhetha i-interlocutor engahleliwe kuwe, onokuthi uqale ukuxoxa naye okanye ucinezele "Okulandelayo" ukuba awuyithandi lo msebenzisi.
Incoko yethu yevidiyo iRoulette ibonelela ngamathuba amaninzi onxibelelwano.Ngayo, unokwenza abantu obaziyo, ufumane imibono emitsha, wandise i-horizons yobomi bakho.Amathuba onxibelelwano olunjalo lubanzi ngakumbi kunembalelwano eqhelekileyo ye-Intanethi, kuba ivumela abangeneleli ukuba babone omnye komnye usebenzisa ikhamera yewebhu.Ukuba uziva unxanelwe unxibelelwano,incoko yevidiyoiya kukunceda uqonde le minqweno.
Iimpawu ze-Chat Roulette
Ukuthandana kwevidiyo: rekhoda iprofayile yakho kwividiyo
Ukongeza kwincoko yevidiyo, unokurekhoda iprofayile yevidiyo eya kuthatha inxaxheba kukhangelo.Njengeeprofayili ezinomdla, bhala imiyalezo kwaye wongeze abasebenzisi njengabahlobo.
Imiyalezo yabucala: yongeza abasebenzisi njengabahlobo
Ukongeza kwimibuzo yevidiyo, kuhlelo lwamva nje lwengxoxo yevidiyo yethu, songeze ukukwazi ukuthumela imiyalezo yabucala.Ukuthumela umyalezo, yongeza i-interlocutor njengomhlobo.
Ubhaliso olukhawulezileyo kunye neprofayile esebenziseka lula
Ingxoxo yethu yevidiyo ikhululekile kwaye isasazwe ngaphandle kokubhalisa, nangona kunjalo, ukuze usebenzise ngokupheleleyo zonke iimpawu zayo, uya kucelwa ukuba ubhalise.Ukubhalisa kulula kangangoko kwaye akuyi kukuthatha ngaphezu kwemizuzwana engama-30 - kufuneka nje ufake i-imeyile yakho kwaye uyiqinisekise ngokucofa ikhonkco elithunyelwe.Kwiprofayile yakho yobuqu, unokubonisa ngokulula iminqweno yakho yokukhetha i-interlocutor kunye nokukhangela kwengxoxo kuya kwenzeka ngokukhetha kwakho.
Kutheni uzalisa ibhalansi kwiakhawunti yakho?
Iwebhusayithi ye-Chat-Ruletka.com yinkonzo ye-freemium, oku kuthetha ukuba ungasebenzisa ingxoxo yethu yevidiyo mahhala, kodwa ukuze usebenzise zonke iinketho kunye nokukhangela kuphela amantombazana kwingxoxo, uya kucelwa ukuba ugcwalise ibhalansi. kwaye ke ukusetyenziswa okungaphezulu kwengxoxo yevidiyo kuya kuba kugcwele.Oku kukuzithandela ngokupheleleyo, ukuba awunamnqweno, ungasebenzisa ingxoxo yethu yevidiyo nangaphandle kokubhalisa, ngokucofa nje iqhosha elithi "Qala ukukhangela".Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukurekhoda iiprofayili, yongeza abasebenzisi njengabahlobo kwaye unxibelelane ngokukodwa namantombazana, sicebisa ukuba ususe umqobo.
Umgaqo osemva kwencoko
Chatrouletteisebenza kumgaqo random ukuthandana .Ukusebenzisa le nkonzo ye-intanethi kulula kakhulu.Akuyi kufuneka uhambe kwiinkqubo zobhaliso ezidinayo, gcwalisa iiprofayili ezinde ngolwazi oluneenkcukacha malunga nawe, njl.Ukungena kwindawo ye-Chat-Ruletka.com, kuya kufuneka ucinezele iqhosha elithi "qalisa", kwaye emva koko ulinde i-interlocutor yakho.I-interlocutor yakho inokuba ngumntu ovela kuyo nayiphi na ikona yeplanethi.Emva kokuthetha nabangeneleli ababhinqileyo okwethutyana, unokugqiba ukuba ufuna ukuqhubeka uthetha okanye hayi.Ukuba uyaqonda ukuba i-interlocutor yakho iyadika, ngoko unokuqhubeka nokukhangela ngokunqakraza iqhosha elithi "okulandelayo".
Ingxoxo yevidiyo Chat-Ruletka.com isimahla kwaye ingaziwa.Kubasebenzisi abaninzi, ezi zinto zithatha isigqibo.Enye inzuzo yonxibelelwano olunjalo luqikelelo lwesiphumo, esibonelela ngeemvakalelo ezininzi ezinomdla.
Incoko yevidiyo yokuthandana yindlela entsha yokufumana umhlobo olungileyo
Iinkonzo ze-Intanethi ezibonelela ngokuba nokwenzeka kokuthandana kwi-intanethi zithandwa kakhulu namhlanje.Olu hlobo interactive ukuthandana kuvumela abantu banamhlanje ukuba babe nexesha elimnandi.Abantu abaninzi namhlanje bakufumanisa kunzima ukuthetha esitratweni nentombazana abangayaziyo.Ngenxa yoku, isangqa sabo sentlalo silinganiselwe.Incoko yevidiyo ibonelela abantu banamhlanje ngamathuba amaninzi onxibelelwano amatsha, ebengafikeleleki ngaphambili.Ukongeza kwincoko yevidiyo, unokurekhoda iprofayile yevidiyo eya kusetyenziswa kukhangelo.Ungaphinda ulayishe ii-avatar kwaye wongeze abasebenzisi abanomdla kuwe njengabahlobo.
Ingxoxo yevidiyo lunxibelelwano ngokuzithandela phakathi kwabantu ababini - nawuphi na kubo unokuphazamisa incoko nangaliphi na ixesha lesibini ngaphandle kokuchaza izizathu (yonke into, njengobomi obuqhelekileyo, kunye nokwahlukana okukuphela kokuba olu nxibelelwano lwenzeka kude).Akukho wena okanye umthetheleli wakho unyanzelekile ukuba unike amagama abo okwenene, ubonise iidilesi, unike iinkcukacha zoqhagamshelwano - oku akuvumelekanga, kuyamkeleka (emva koko, incoko yadalwa ukuze "unciphise" iintliziyo ezizimeleyo), kodwa wena ngokwakho uzimisele. ongathanda ukuncokola naye ngaphandle kwencoko, kwaye nongathandanga ukuthetha naye.
Thetha Roulette kunye namantombazana yinyani!
Amantombazana akwi-chat roulette ayilohlobo oluthile lweearhente ezihlawulwayo ezinomsebenzi wokurhwebesha kunye nokonwabisa amadoda angenele le ncoko.La ngamantombazana aqhelekileyo, afana nawe, aphelile kule ngxoxo ekufuneni iqabane lomphefumlo okanye iqabane elimnandi.Kule nkalo, ingxoxo yevidiyo ye-Chat-Ruletka.com ingabizwa ngokuba yinkonzo yokuthandana, kunye nokwahlukana kuphela kukuba ukuqhelana kwenzeka ngendlela yokukhetha okungahleliwe kunye nonxibelelwano lwe-intanethi ngaphandle kwembalelwano "engenantsingiselo" kunye nomntu oboniswe kuyo. "ifoto" - bobabini umfana kunye nentombazana babona i-interlocutor yakhe kwaye bayaqonda ukuba ezi azikho iifoto ezikhohlisayo, kodwa umntu wangempela.Abanye abafana, kuba besoyika ukwaliwa, baba neentloni zokuya kumantombazana kwiindawo zikawonke-wonke ukuze bathethe ukuze baqhelane nawo.
Incoko yevidiyo ye-Chat-Ruletka.com ayikona nje ukuzonwabisa kunye nendlela yokuba nexesha elimnandi.Ikwalithuba lokufumana iqabane lomphefumlo wakho.I-Chatroulette kunye namantombazana ivumela abantu abancinci ukuba baseke unxibelelwano olulula kunye nesini esilungileyo, sibenze bakhululeke ngakumbi, banobudlelwane kwaye bathandeke.I-Chatroulette kunye namantombazana liqonga elifanelekileyo apho unokuncokola nomntu ongakhethiyo.Ngokomgaqo, ukuqhelana okunjalo akufani kakhulu nomntu oqhelekileyo esitratweni, esinokubizwa ngokuba "i-roulette yokuphila" - awukwazi ukuba ngubani oza kuba ngubuhle obuthobekileyo.
Ulonwabo lokufumana ngokungaqhelekanga: incoko yevidiyo
Ngoko, uye kwi-Chatroulette, ebhalisiwe - yintoni elandelayo?Unokukhetha isini seqabane ngokwakho, okanye inkqubo ngokwayo iya kukunika i-interlocutor yokuthandana.Uqala unxibelelwano, kwaye emva koko, njengoko unethamsanqa:
I-ChatRulet yindlela entle yokuthetha nomntu ongamaziyo.
Imigaqo yokunxibelelana namantombazana kwi-chatroulette ilula kakhulu:
Iingenelo ze-roulette yokuncokola kunye namantombazana
Ziziphi iingenelo eziphambili zokutyelela i-roulette chat kunye namantombazana?Zimbini ngokusisiseko:
Okokuqala, amava onxibelelwano lomntu kunye nentombazana engaqhelekanga ayilimazi nabani na.Into yokuba neentloni kunye nobukhoboka isetyenzisiwe-ngaphandle koqhagamshelwano olubonakalayo, uyaqonda ukuba ukude omnye komnye kwaye ngokubanzi, le ncoko ayikunyanzeli nantoni na (isiphumo somnye umhambi kuloliwe, kuphela ukunyaniseka ngakumbi abantu abaneentloni).
Okwesibini, ngokungafaniyo neengxoxo zevidiyo zendabuko, apha unokufumana i-interlocutor emnandi, kwaye ungathandi nje ukuthakazelisa kwendalo ye-interlocutor.
Usacinga?Zive ukhululekile ukuyaChatroulette kunye namantombazanakwaye uvavanye zonke iingenelo ukuthandana eqhelekileyo ukusuka kumava ethu.
Ncokola Roulette-incoko yevidiyo kwihlabathi liphela
I- Chatroulette(igama livela kwigama elithi "Chatroulette") yingxoxo yevidiyo ye-intanethi emhlabeni jikelele, yindawo apho unokusebenzisana nabantu abatsha usebenzisa ikhamera yewebhu kunye nemakrofoni, kodwa ukuze uyisebenzise, ​​kufuneka ube ne-Adobe Flash. Umdlali ufake inguqulelo yamva nje.
Isivakashi kwisayithi yethu sidibana ne-interlocutor ekhethiweyo ekhethiweyo kwaye iqala ukuthetha naye, ukuba ngokukhawuleza akazange athande i-interlocutor, unokutshintshwa ngokulula ukuya kwelinye (kuba oku kufuneka ucofe iqhosha elithi "Okulandelayo").
Iimpawu eziphambili zencoko yethu:
Incoko yethu ayinazo ii-analogues kwaye yahluke kakhulu kwezinye iincoko.Ngezantsi ungabona izibonelelo ezi-5:
Ukubhaliswa ngokukhawuleza- ukuze uqale ukusebenza kunye nenkonzo, awudingi ukuchitha ixesha elininzi.Ukubhalisa kuthatha imizuzu emi-5 kuphela.
Ukufikelela kwi-clock-clock- ungangena kwingxoxo nangaliphi na ixesha losuku kwaye uzithole u-interlocutor: indoda okanye umfazi.
Ukugubungela abaphulaphuli abaninzi- yonke imihla inani elikhulu labasebenzisi abavela kwihlabathi liphela bandwendwela indawo.Unokufumana i-interlocutor evela e-USA, eDenmark, eGreat Britain, eRashiya, eSpain, eItali njalo njalo.
Ukukhangela abahlobo okuzinzileyo-akufuneki uhlale kwindawo imini yonke ukuze udibane nabantu abanomdla.Rekhoda umyalezo wevidiyo kubasebenzisi kwaye uxelele ngawe.Ngokuqinisekileyo abantu baya kujonga irekhodi kwaye baqhagamshelane nawe.Unokukhangela abahlobo ngendlela efanayo.
Ukukhetha ngokwesini-kunye nathi kuphela onokukhetha isini se-interlocutor kwaye ucoce abantu ongafuni ukunxibelelana nabo.
Ngokwahlukileyo, kubalulekile ukuqaphela ukuba sithobela yonke imithetho.Ukuhlambalaza okugqithisileyo kubasebenzisi kunye nokubonakaliswa kobuzwe okanye ubuhlanga, ibhloko yobomi bonke inikezelwa.Xela ulwaphulo-mthetho kumongameli kwaye wenze incoko yethu yevidiyo ibengcono.
Iimpendulo kwimibuzo edla ngokubuzwa:
Uyivula njani ikhamera yewebhu?
Akukho nto inzima kule nto.Okokuqala, qhagamshela ikhamera yewebhu kwizibuko le-USB ukuba uyithenge ngokwahlukeneyo kwikhompyuter yakho.Emva koko, umyalezo malunga nokudibanisa isixhobo esitsha kufuneka uvele.Ukuba oku akwenzeki, ngoko kunokwenzeka ukuba izibuko liphantsi.Xhuma ikhamera kwi-port ye-USB eyahlukileyo (ngokuqhelekileyo kukho ubuncinane i-4 kwiiPC zanamhlanje).
Emva koko, kufuneka ufakele umqhubi oza nekhamera yewebhu.Landela imiyalelo yeprogram kwaye ekugqibeleni ukhangele ukusebenza komqhubi.Ikuvumela ukuba uvavanye ukurekhoda kwevidiyo, ukuthatha iifoto, uhlele i-FPS, njl.Ukuba umqhubi akazange eze nekhamera, bhala igama lemodeli kwi-injini yokukhangela kwaye ufumane inkqubo yamva nje kwiwebhusayithi esemthethweni yomenzi.
Kwii-laptops, yonke into ilula kakhulu - umqhubi sele efakwe, kwaye ikhamera yewebhu yakhiwe ngaphakathi, ngoko akufanele ukhathazeke malunga ne-port ye-USB okanye inguqulo yomqhubi.
Kukwafuneka uqiniseke ukuba ufake iAdobe Flash Player ukuze ubonise ividiyo echanekileyo kwisikhangeli.
Khawucinge ukuba sele uphumelele inqanaba lokulungiselela kwaye ikhamera isebenza ngokuchanekileyo.Ke ukuya kwinto encinci - yiya kwincoko kwayeukhethe isini sakho, emva koko ucofe iqhosha elithi "vula ikhamera", emva koko kuya kuvela uphawu apho kufuneka uphawule amanqaku ama-2 - "vumela" kwaye "khumbula." ” uze ucofe iqhosha lokuvala.
Emva koko, ungasebenzisa ngokulula ikhamera yewebhu kwincoko yevidiyo (iya kuvula ngokuzenzekelayo ngaphandle kolunye useto olongezelelweyo).
Uvula njani kwaye usete imakrofoni?
Ukuseta imakrofoni yingxaki yokwenyani kubasebenzisi abaninzi bencoko.Okokuqala, ukufutha kaninzi kubonakala ngenxa yesethingi engalunganga yesixhobo.Okwesibini, nangakumbi ayisebenzi kwaphela kwaye i-interlocutor ayikuva.Ukusebenza okuchanekileyo kwesixhobo, ezi nkqubo zilandelayo zokulungiselela kufuneka zenziwe:
Qhagamshela imakrofoni kwi-motherboard.Ukwenza oku, yidibanise kwikhonkco elingasemva kwiyunithi yenkqubo.Njengomthetho, iphawulwe ngepinki.Iilaptops zineentloko ezifanayo kunye ne-microphone port, ngoko ke kufuneka uthenge iadaptha (ixabiso eliphantsi kwaye inobungakanani obuncinci).
Unokuqinisekisa ukuba imakrofoni isebenza ngokuchanekileyo emva kokujonga umqhubi.Yiya kumphathi wesixhobo sokuqala kwaye ujonge abaqhubi.Ukuba kukho izixhobo ezingabonakaliyo, khuphela umqhubi ngewebhusayithi esemthethweni yomenzi.Emva koko, imakrofoni yakho iya kuvela kwizixhobo zesandi.
Hamba ngokuqala kwipaneli yokulawula, kwaye ngayo ukuya kwicandelo "i-hardware kunye nesandi".Apho, kwicandelo "lerekhodi", uya kufumana imakrofoni yakho.Cofa kuyo kwaye ucofe iqhosha elithi "properties" kwicala.Apho unokuyivula kwaye uqale ukumamela.
Qinisekisa ukuba ulungelelanise amanqanaba okuphelisa ingxolo kwaye wenze isandi sicace.Kwakhona susa zonke iziphumo zesandi kwithebhu "yokuphucula".
Unokwenza zonke ezi nkqubo zingentla ngoMphathi weRealtek HD.Unako kwakhona ukungena kuyo ngokusebenzisa icandelo kwi panel yolawulo - hardware kunye nesandi.
Uyivula njani imakrofoni kwincoko yevidiyo?
Cofa ekunene kwisicelo, emva koko ukhethe ithebhu ethi "iinketho" kwimenyu yesilayidi.Apho, cofa i icon yombhobho.Kwimenyu yesilayidi, khetha imodeli yemakrofoni yakho, kwaye emva koko ulungelelanise ivolumu yokurekhoda (ungabeka isilayidi phakathi).
Emva koko, i-interlocutor yakho iya kuva ilizwi lakho ngokucacileyo, kwaye imakrofoni iya kusebenza kakuhle ixesha elide.
Ziziphi iinjongo endinokuthi ndisebenzise i-Chatroulette?
Ukusuka ekususeni uloyiko ukuya kwamanye amazwe - uluhlu lubanzi kakhulu kwaye konke kuxhomekeke kwiingcamango zakho.Ngezantsi ungabona iinjongo eziphambili zokusebenzisa iChatroulette:
Ukuphumla- emva komsebenzi onzima wosuku, ufuna ukuphumla kwaye ekugqibeleni ulibale ngomsebenzi.Kwincoko, ungancokola ngezihloko ezingathathi hlangothi, uxoxe ngemidlalo yevidiyo, ezemidlalo, umculo, uthethe ngawe okanye umnxibelelanisi wakho, njalo njalo.
Ukususa uloyiko- ngaba uyoyika ukucula okanye ukuxoxa ngezihloko ezithile?Kwincoko, i-interlocutor ikhethwe ngokungacwangciswanga, ke akukho namnye kubahlobo bakho oya kukuqaphela.Unokukhupha ngokukhawuleza ii-complexes.
Khangela iqabane lomphefumlo- amantombazana adibana nabafana kwingxoxo kunye nokuphambene, kwaye kaninzi umqobo wolwimi awuyiyo ingxaki ebalulekileyo.Ngokusebenzisa incoko, abantu abaninzi baye bafumana iqabane lomphefumlo, ngoko yintoni ekuthintelayo ukuba wenze okufanayo?
Ukufunda ulwimi- ezona khosi zibiza kakhulu ulwimi lwasemzini aziyithathi indawo yonxibelelwano kunye nesithethi somthonyama.Kwingxoxo uya kufumana amaSpanish, amaTaliyane, amaMelika, amaGrike, amaJapan, njl.Ngoko unokuphucula ulwazi lwakho njengoko ufuna.
Ukuhamba- kutheni ungenzi ubuhlobo nomntu ovela kwelinye ilizwe kwaye uze kumtyelela?Uya kukunceda ufumane i-visa kwaye ufumane indawo yokuhlala, kunye nokukubonisa isixeko kunye nezona ndawo zibalaseleyo.
Olu luhlu olufutshane lokhetho lwakho.Khumbula ukuba yonke into ixhomekeke kwingcinga yakho, kodwa qiniseka ukuba wenza ngokwemigaqo yencoko yethu yevidiyo.
Ncokola Roulette 603075
I- Chatrouletteyinkonzo edumileyo nelula ekuvumela ukuba unxibelelane ngokungaziwa nabasebenzisi abavela kwihlabathi liphela.
Ukudibana nabantu esitratweni yinto yezolo.Yenza abahlobo abatsha kwihlabathi liphela, ncokola, wabelane ngamava, ubonise iitalente zakho kwaye ukonwabele incoko ekhanyayo.I-Chat Roulette yenye yezona ncoko zinkulu kwi-Runet ezinokubakho okumangalisayo, ezifikelela kumakhulu amawaka abasebenzisi yonke imihla!Nxibelelana nabasebenzisi abathetha isiRashiya abavela kwihlabathi liphela ngaphandle kokufumana ukungonwabi.Akukho kubhaliswa, akukho lwazi lomntu, yonke into ilula kwaye iyakhawuleza: khuphela izicelo kwaye ucofe iqhosha elithi "qala"!
Ukuba uneentloni ngexesha lokuthandana, uneentloni zokuza esitratweni kwaye wazane kuqala, emva koko ingxoxo yevidiyo engaziwa yinto oyifunayo!Yenza abahlobo abatsha, abantu abanengqondo efanayo, kwaye mhlawumbi neqabane lomphefumlo.
I-Chatroulette GooglMe- eyona ncoko yevidiyo ilungileyo yokuthandana kunye nokuncokola
Namhlanje, le ngxoxo yindlela ekhethekileyo kunye nenomdla yokunqoba ukwesaba kunye neentloni, ukufumana abahlobo, ukuqala ukuthandana, ukuqala ubudlelwane.Ngoku akukho mfuneko yokubhala oonobumba abamnyama kwiscreen esimhlophe, akukho ngqiqweni ukuchitha ixesha elininzi ekukhetheni okudinayo kwamabinzana, kuba incoko yevidiyo ivula iinkalo ezahlukeneyo ngokupheleleyo.Kufuneka uvule ikhompyuter yakho kwaye uye kuGoogleme, kwaye yonke enye into iyinto yamathuba.Ubunqabileyo bale nkonzo kukuba uya kuhlala unxibelelana nomntu ongamaziyo.Ubuqhophololo obunjalo buvuselela ingqondo kwaye budala umdla, incoko nganye yinto entsha eyaziwayo, incoko efundisayo.
Iincoko ezinomdla, iingxoxo ezinde zilinde wena, uya kufumana abantu abaninzi abahlukeneyo apha, abantu obaziyo kwaye, mhlawumbi, omnye wabo uya kuba yinto engaphezulu.Khumbula ukuba yonke intombazana ingumkhuseli ofanelekileyo wentliziyo yakho.Apha wonke umntu ufumana into ayifunayo.
Ingxoxo yevidiyo - ukuthandana random ehlabathini lonke
Eyona nto iphambili kunye nephambili yesiza kukuba awusoze wazi ukuba ngubani oza kuqhelana naye, umnxeba wevidiyo.I-chatroulette engaqhelekanga, ngokukhetha okungaqhelekanga, iya kukufumana umntu wengxoxo, ikunike unxibelelwano, ukuthandana kunye neemvakalelo ezininzi ezintle.Iincoko ezinjalo zihlala zingaqhelekanga, zifundisa abantu ukuba bavuleleke kwaye bakhululeke, batshintshe ngokukhawuleza kwiimeko.
Le roulette yengxoxo ayifani nabo bonke abanye, kuba unokuqalisa iincoko nangaliphi na ixesha elilungele wena.Kungakhathaliseki ukuba incoko iqhubeka nini imini okanye ebusuku, uya kuhlala ufumana i-interlocutor engahleliwe.Apha uya kufumana abantu abatsha obaziyo abanokutshintsha ngokupheleleyo ubomi bakho bonke.I-interlocutor engalindelekanga kunye nolwandle lweemvakalelo ezintle-yiloo nto ekulindeleyo ukuba undwendwela incoko yethu, evulekele wena simahla.
IGoogleme ilula kwaye iyakhawuleza!
Khumbula ukuba iGoogleme yingxoxo ephuculweyo, apho yonke into ilula kakhulu kwaye ikhawuleza.Ujongano olusebenziseka lula luya kukunceda ukuba ujonge yonke into ngokulula.Kukho izigidi zababhalisi kwisiseko sedatha abasebenzisa incoko njengeyona ndlela ilungileyo yokufowuna.Kodwa eyona nto ibalulekileyo kukuba akufuneki ujonge umntu oza kuvuya ukuthetha naye, incoko yewebhu iya kwenza ukhetho kuwe.Kwi-chatroulette, yonke into yenziwe ifikeleleke ngokusemandleni, eyona nto ibalulekileyo.
Yenze ngekhamera yewebhu
Abantu abaninzi bacinga ukuba incoko yevidiyo enjalo ayinakuthatha indawo yonxibelelwano lokwenyani, kodwa ingxelo evela kubathathi-nxaxheba iqinisekisa into eyahlukileyo ngokupheleleyo.Kule meko, i-Intanethi iya kukuvumela ukuba usondele, kude kube kutshanje, umntu ongamaziyo kakuhle kangangokuba uya kuziva esondele kakhulu.Kwenzeka into efanayo xa unxibelelana kwiPremium version yencoko yevidiyo ye-roulette, unokuqinisekisa oku ngokufunda uphononongo malunga neKuMit.
Ukuze unxibelelwano lwenzeke, kufuneka:
i-Intanethi ekhawulezayo, eya kuvula ukufikelela kwihlabathi;
ikhamera yewebhu eqhelekileyo, esona sixhobo siphambili sale nkonzo;
umnqweno wakho wokufumana ubuqabane ukuthandana kunye nabahlobo abatsha.
Unxibelelwano olufumana apha aluyi kulibaleka, aluyi kuba luqhelekileyo, kwaye i-interlocutor iya kukuvumela ukuba ungathethi nje kuphela, kodwa nokuba ufunde izinto ezininzi zokuqonda.I-roulette yevidiyo ephuculweyo nenika umdla kakhulu iya kukufundisa ukuba uvuleke, ubande ama-complexes.
Mhlawumbi uyazibuza ukuba kutheni i-chatrandom - impendulo apha ilula - yingxoxo yanamhlanje ejoliswe kuphela kunxibelelwano oluhle kunye neencoko ezimnandi.Akukho nkohliso apha, kuba abantu bokwenyani bathatha inxaxheba kwiingxoxo.Incoko enjalo isusa bonke ubunzima, kwaye inika inzuzo.Akukho nto inomdla ngaphezu kokwenza olu hlobo lolwazi kunye nokufumana abantu abanomdla.
Ikhamera yakho yewebhu iya kukuvulela amathuba, kwaye ubukrelekrele kunye nokukwazi ukunxibelelana kuya kuba sisitshixo kwiifowuni zevidiyo eziyimpumelelo.Ngokuqinisekileyo bonke abantu abatsha abaqhelana nabo banokuthatha ixesha elide, mhlawumbi baya kuhlala benobuhlobo, okanye mhlawumbi uya kudibana nekamva lakho.Sithanda ukukukhumbuza ukuba yonke into inokwenzeka kwi-chatroulette, kwaye ke akufanele ungabandakanyi ithuba elinjalo.I-roulette yethu ngekhamera inokuba sisixhobo esiya kukunika eyona nto imangalisayo, kuba intombazana inokuba yileyo ubuyifuna.
Kuphela kuGooglMe wonke umfana kunye nayo yonke intombazana inalo lonke ithuba lokudibana nothando lwabo.Kwincoko yevidiyo engacwangciswanga, zininzi izinto ezenzekayo kunye nezinto ezingafaniyo, ngamanye amaxesha kukho ukuphoxeka, kodwa unxibelelwano alusoloko luyinto eqhelekileyo.Into engenakuphikiswa, okanye endaweni yoko, eyona nto iphambili kukuba incoko yevidiyo kwihlabathi liphela ngumsebenzi omtsha nonomdla kuye wonke umntu.
Eyona online ukuthandana!
Ke, namhlanje incoko yewebhu enomdla ivulekele wena, engafaniyo nezinye iinkonzo.Ukuba ubuzifunela incoko yevidiyo yasimahla, uGoogleme lolona khetho lulungileyo.Ngokusebenzisa i-chatroulette uya kwenza umnxeba onomdla rhoqo, nihleke kunye, nifunde ulwazi oluninzi oluluncedo.Akunyanzelekanga ukuba uyikhuphele, kuba i-roulette imisela ukuba ngubani oza kunxibelelana naye, ngokoqobo, kwimizuzwana embalwa, intombazana entle iya kuvela esikrinini kwaye ikunike uncumo.Emva koko uya kuqalisa unxibelelwano, khetha isihloko sengxoxo, uqale ukwazi omnye nomnye.Ukhetho olukhawulezayo kunye nolukhethiweyo luya kuphumelela kakhulu, kwaye uya kulibala ukuba uthatha inxaxheba kwi-chatroulette, umgama uya kususwa.
UGoogleme uya kuba lusindiso lwakho ekudikweni nakubusuku obulusizi
Ngoku awudingi kuba nexhala lokuba awunamntu wokuthetha naye, incoko iya kukuvulela indawo entsha ngokupheleleyo nge-Intanethi.Kuya kuhlala kukho i-interlocutor kuwe, i-roulette iya kumkhetha, kwaye uya kulahla isithukuthezi esinzima kuwe.Kuphela kwi-analogue yethu ye-Chatroulette uya kukwazi ukuxabisa ukubaluleka kweencoko kunye neengxoxo.
I-Chatroulette-Incoko yakho yevidiyo
I-roulette yengxoxo yevidiyo ingaphezulu kwesiqingatha sesigidi sabasebenzisi abavela eRashiya nakumazwe eCIS yonke imihla.Kodwa ayisiyiyo le nto kuphela eyenza ukuba ibe yeyona ncoko idumileyo yolwimi lwesiRashiya.
I-roulette yengxoxo yevidiyo ibonelela ngamathuba awodwa onxibelelwano ongayi kufumana kuyo nayiphi na enye i-roulette yokuncokola.Ngaba uyafuna ukuqiniseka ngale nto?
I-Chatroulette ilula njengokuqongqotha amapere
Ucinezela "ukuqala" - kwaye i-roulette yengxoxo ngokwayo ikhethela i-interlocutor kuwe.Kwaye iyenza ngoko nangoko, akunyanzelekanga nokuba ubhalise.Kwaye okona kubaluleke kakhulu - akukho ntlawulo yenyanga, yiza kwaye uxoxe simahla!Ukulula kunye nokulula yintetho ephambili kunye nemfihlo yokuthandwa kwe-chatroulette.
Abantu obaqhelileyo?NgeNcoko yeVidiyo-akukho ngxaki!
Kwanokuthetha nje nomntu ongamaziyo esitratweni akuyondlwan’ iyanetha kwabaninzi.Uthini ngokuthandana.Amantombazana ayesaba ukubonakala e-intrusive, abafana banqanyulwe ngamathuba okugatywa.Zama ukuqikelela ukuba umntu ukulungele na ukunxibelelana nawe.Ngokuqinisekileyo, unokuzinikela kwintando yeentloni zakho, ukuvuma ukoyiswa, unikezele ukwesaba "ihlazo" phambi komntu wonke.Usenako ukuphupha malunga nokwazana ngokwakho.Apho ukuya khona, indlela yokusombulula le ngxaki?
Social networks zezabo sele beqhelekile.Chatroulette impendulo echanekileyo.Awudingi ukuba nexhala: umntu odibana naye kwincoko yevidiyo sele elungele unxibelelwano.Yinto nje yokuba uthi "molo".
Dibana kwaye Uvalelise Ngokulula
Ukhokelela kwimbonakalo ekhangayo, kwaye i-interlocutor yaba yinto engathandekiyo?Zingaphi izihlandlo sele kumhla wokuqala, emva kokuthetha nomntu nje kancinane, ngaba ufuna ujike abaleke?Kodwa imithetho echubekileyo inyanzelekile ukuba iqhubeke nonxibelelwano olukruqulayo, ukoyisa ukuzamla nokucaphuka.
Kwi-chatroulette, ukusombulula le ngxaki, nqakraza nje iqhosha elithi "elilandelayo", kwaye ingxoxo yevidiyo iya kutshintshela kwi-interlocutor entsha.Shiya ngesiNgesi, nxibelelana kuphela nabo bantu unomdla kubo!
Ikhamera yewebhu yenye yokudibanisa
Unxibelelwano kunye nokuthandana kuye kwaba lula ngokufika kwe-Intanethi.Kodwa iisayithi zokuthandana kunye neengxoxo zetekisi azikuvumeli ukuba wazi umntu kunye nencoko yevidiyo yobuso ngobuso.Kutheni ucima iminwe yakho kwikhibhodi, ukuba unokuva kwaye ubone i-interlocutor?Kwaye akulula kangako ukuqonda umntu kuphela ngeeleta kunye neemvakalelo ezivela kwisiteketiso esingenabuso.Abayi kuthatha indawo yonxibelelwano oluphilayo.
Kwakhona, unokubeka ifoto yomnye umntu kwi-avatar-abaninzi abakhohlisayo benza oku.Kwi-chatroulette, awukwazi ukukopela ngolo hlobo-uyabona kwaye uve umnxibelelanisi ngexesha langempela.Ngekhamera yewebhu kulula ngakumbi ukwenza abantu abatsha!
Mke kukukruquka nobulolo!
Wonke umntu unamaxesha apho unxibelelwano lungekho.Into onokuthi wabelane ngayo ngokulula nomntu ohamba naye, awufuni nje ukuthetha nabahlobo kunye nezalamane.I-Chatroulette ngumthombo ongapheliyo waloo "bakhenkethi" abanjalo - abantu ongazi nto ngabo kwaye abangaziyo.Kwaye oko kuthetha ukuba akukho nto yoyika.Incoko yevidiyo ayaziwa, akukho mntu uya kukwazi ukufumanisa ngakumbi malunga nawe kunokuba ufuna ukwabelana.
Kwi-chatroulette uya kufumana yonke into: ukusuka kunxibelelwano oluvuyayo, olungathandekiyo kwizihloko ezingenamsebenzi ukuya kwincoko enyanisekileyo "intliziyo ukuya entliziyweni".
Hleka kwaye uxoxe ngothotho lwakho oluthandayo?Ngokulula!Hlangana nothando lobomi bakho?Yizame kwaye ubone ukuba iyasebenza kuwe;)
I-Chatroulette yezixhobo eziphathwayo
Ngaba ufuna ukunxibelelana nabahlobo bakudala okanye ufumane abatsha kungekuphela nje ekhaya okanye emsebenzini, kodwa nakwiihambo, nakuyo nayiphi na indawo ekulungeleyo?I-roulette yencoko yevidiyongoku inawe kwiiselfowuni.Ikhefu lesidlo sasemini, uhambo olude kwezothutho alukho isizathu sokuba nesithukuthezi.Ngeli xesha, unokuqhelana kwaye unxibelelane nabanye abasebenzisi be-chatroulettekwi-intanethi.
Inguqulelo yenkqubo yee-smartphones iguqulelwe kwizikrini zezixhobo ezahlukeneyo zeselfowuni.Uya kukwazi ukusebenzisa yonke imisebenzi ngaphandle kwezithintelo.Into ephambili kukufikelela kwi-Intanethi.
Iimpawu zengxoxo yevidiyo
Kunye nabangeneleli abatsha.Ukufumana abahlobo, abantu abanengqondo efanayo okanye iqabane lomphefumlo, kufuneka uvule ikhamera, cofa iqhosha elihambelanayo kwisikrini kwaye uqale ukukhetha iqabane.Unokwenza umdla oqheleneyo nabahlali abavela kulo naliphi na ilizwe emhlabeni.
Thetha nomhlobo.Ngaba sele udibene nabaphi na abasebenzisi bevidiyo?Zive ukhululekile ukucofa iqhosha kwisikrini sefowuni "Ncokola nomhlobo", thumela ikhonkco elibonakala kumhlobo kwaye uqale unxibelelwano ngaphandle kwemida kunye nokubhaliswa.
Ngosasazo lwevidiyo.Ingxoxo yevidiyo kunye namantombazanaokanye abafana banokwenziwa ngevidiyo, okt.abasebenzisi baya kukwazi ukubonana nokuvana phantse ngokungathi bebedibana ngokobuqu.Oku kwenza unxibelelwano lube nomdla ngakumbi kwaye lube nolwazi.
NgeSMS.Andiqinisekanga ukuba uqalise "okufutshane" umntu omaziyo, qalisaukuncokola kwi-roulette yencoko kunye nentombazanaokanye umfana ngeSMS.Imiyalezo, njengeefowuni, ikhuselwe ngoguqulelo oluntsonkothileyo.Abantu abangagunyaziswanga abayi kukwazi ukungena kwimbalelwano yakho.
Ukuqala abantu obaziyo abanomdla, kwanele ukuba nefowuni ephathwayo kunye nokufikelela kwi-Intanethi.Ungancokola okanye ufowunele abathathi-nxaxhebabengxoxo yevidiyoukusuka naphi na emhlabeni.
Yenzelwa bani inkonzo yethu?
Abahlali bawo onke amazwe ehlabathi, kungakhathaliseki ubudala, umsebenzi kunye nezinto abazithandayo, banokunxibelelanangevidiyo ye-roulette.Ukuqala abahlobo abangalibalekiyo, cofa nje kwiqhosha elithi "Qala".
uneentloni ukuqhelana nesitrato- abasebenzisi bethu sele besetyenzisiwe ukuba banxibelelane kwaye babe nexesha elimnandi, ngoko akuyi kubakho ubunzima ngokuthandana;
ukuba ufuna ukudibana nabantu bokwenyani- unokumema i-interlocutorkwincoko yevidiyo ye-rouletteukuya kumhla, itheko okanye intlanganiso kunye nabahlobo;
ukuba ufuna ukulolonga ulwazi lwakho ngolwimi lwasemzini, ungaziqhelanisa nezakhono zakho zonxibelelwano kulo naluphi na ulwimi lwesijikelezi-langa ngaphandle kwentlawulo.
I- Chatrouletteivulelekilekumantombazanakunye nabafana abakhetha indlela yanamhlanje, elula kwaye enomdla yokunxibelelana.
Izinto eziluncedo kwi-chatroulette yeselula
Awudingi ukukhuphela inkqubo.Okufuneka ukwenze kukutyelela iwebhusayithi yethu.Ukusebenziseka ngokulula kunye nokufikelela okukhawulezayo, sincoma ukongeza iChatroulette kwiibhukhmakhi zesikhangeli sakho.
Amathuba angenasiphelo onxibelelwano.I-roulette yengxoxo yevidiyo inokudlalwakunye namantombazana okanye amakhwenkwe, iminyaka kunye nendawo yokuhlala ayinamsebenzi.
Ukulula kunye nokulula ukusetyenziswa.Akukho sidingo sokwenza useto olunzima, hamba ngobhaliso olude, wenze intlawulo ngeSMS, vula nje isiza kwaye sazane.
100% yabucala.Abasebenzisi abanyanzelekanga ukuba bafake iinkcukacha zobuqu, bangenise idilesi ye-imeyile, okanye bangenise inombolo yefowuni.
Unxibelelwano olukhululekile.Ukuba ngenxa yesizathu esithile awuzange uthande i-interlocutor, kwi-roulette yengxoxokukho ithuba "lokuskrola" ngokucofa iqhosha elithi "Okulandelayo".
Ungandwendwela indawo ngalo naliphi na ixesha lemini okanye lobusuku, nokuba uthini na umhla wekhalenda.Uqinisekisiwe ukuba ufumane amawaka amantombazana kunye nabafana kwi-intanethi abakulungele ukuqala ukuxoxa ngoku.Joyinaincoko yevidiyo ye-roulette, qalisa ukukhangela i-interlocutor kwaye uqinisekisiwe ukuba unokuzonwabisa kunye nexesha elingaqhelekanga lokukhulula.
Malunga nenkampani: Bonke abasebenzisi bengxoxo yevidiyo bayakhuthazwa ukuba bafunde i-FAQ/FAQ kunye namanye amaphepha, amakhonkco anokufumaneka kwiqela.Musa ukunikezela ngemiyalezo yokuthengisa, iifowuni zokongeza abahlobo, imibuliso kunye neminye imiyalezo engeyiyo iindaba zenkonzo njengeendaba zeqela - aziyi kupapashwa.Iwebhusayithi: https://videochatru.com
I-Chatroulette https://chatruletka.com/ iqokelelana ngokukhawuleza ijikeleze hayi nje iinkwenkwezi zeTV, kodwa neenkwenkwezi zikaYouTube.
Ungaphoswa yividiyo entsha ye-Streamers Karina, apho adibana khona neendwendwe zencoko yethu yevidiyo!
I-Chatruletka yingxoxo yevidiyo yokuhlangana kunye nokunxibelelana nabantu kwihlabathi liphela.Xa uthelekisa neChatroulette, inamakhulu ..
Kumboniso odumileyo othi "Evening Urgant" ibe licandelo elisisigxina apho u-Ivan Urgant enxibelelana nosaziwayo kunye neendwendwe kwi-Chatroulette yethu - https://chatruletka.com/
Kutshanje, u-Urgant uthethe kwincoko yethu yevidiyo noTimati
Isimangaliso esimnandi kubasebenzisi be-iOS abangakwaziyo ukusebenzisa incoko yethu yevidiyo ixesha elide!
Sibulela ngomonde wabo, sagqiba ekubeni sibenzele okungakumbi kuneChatroulette kuphela - Imithetho yeNgxoxo ye-app ye-iPhone kunye ne-iPad.
I-app ye-Chat Rules sele ifumaneka kwi-Apple Store, sijoyine!
Mhlawumbi umntu akazi, kodwa sinoguqulelo lwamazwe ngamazwe lweChatroulette ngokukwazi ukukhetha ilizwe le-interlocutor: https://chatruletka.com/
Kungekudala, u-Ivan Urgant kunye noMaxim Galkin bafakwe kwingxoxo yethu.Bonisa ngokupheleleyo.Kwabo bangabonanga esi siqendu, sincoma ukuba ubukele ividiyo kumyalezo kwaye wabelane ngayo nabahlobo bakho.
Kwi "Evening Urgant" kwavela isihloko esitsha "Intlanganiso nomntu onomdla".Kweli candelo, u-Ivan Urgant kunye nondwendwe lwenkqubo unxibelelana neendwendwe zengxoxo yethu yevidiyo
Thetha nathi kwincoko yevidiyo ye-roulette!
Ngoku abantu abaninzi banxibelelana kwi-chatroulette.Kwaye konke ngenxa yokuba unxibelelwano ngeSMS okanye kwiintanethi zentlalo akusazisi ulonwabo ngenxa yokuba abantu ababonani okanye omnye wabangeneleli unokubonisa ulwazi olungachanekanga.
Olu lunxibelelwano oluphilayo ngekhamera yewebhu, xa ngamnye wabangeneleli ebona ubuso, iimvakalelo zomnye umntu.Kananjalo akuvumelekanga ukunxibelelana usebenzisa i-audio okanye incoko yokubhaliweyo.Nganye yeendwendwe zengxoxo ifika kwi-interlocutor engakhethiyo, lowo ivili le-roulette likhetha yena.Ukuba awuzange uthande incoko nomntu okanye awunayo izihloko ezifanayo zokunxibelelana, ngoko nangaliphi na ixesha ungayishiya incoko, fumana omnye umphulaphuli.Umgaqo osisiseko wengxoxo ngumphulaphuli ongakhethiyo okanye umnxibelelanisi ongayi kudibana naye ngexesha lencoko elandelayo.Ngaphandle koko unokumongeza njengomhlobo.
Iincoko zethu aziziwa.Oku kuthetha ukuba akukho mntu uya kwazi malunga nembalelwano okanye incoko yakho.Ukubhaliswa kwi-chatroulettenako akuyomfuneko.Zonke iincoko zethu ze-roulette zisimahla, kwaye iindwendwe akufuneki zikhuphele nantoni na.
Indawo yethu inenani elikhulu lamagumbi okuxoxa apho unganxibelelana ngaphandle kwezithintelo nabantu ongabaziyo.Unokunxibelelana ngaphandle kwemida kunye nabemi baseYurophu, Belarus, Russia, USA, Germany kunye namanye amazwe.Khetha incoko kwaye unxibelelane ngaphandle kwezithintelo apha kwaye ngoku.Kwaye ukuyenza ihlale inomdla kubakhenkethi, sihlala sizalisa uluhlu lweengxoxo, sazisa izixhobo ezahlukeneyo zokwenza lula unxibelelwano lwakho.
Ukuthandana kunye nokuncokola kwi-chatroulette kwi-intanethi kumnandi!
I- Chatroulettengokuyintloko yindawo yokunxibelelana, abantu abatsha, ukuhlangana nabahlobo.Indawo inamagumbi eengxoxo ahlukeneyo onxibelelwano lwevidiyo kwihlabathi jikelele.Kodwa kukho iteksti kunye neengxoxo audio.Kwaye ukuba awufuni into enomdla, ngoko sinayo i-bot-interlocutor.
Ukuze unxibelelane ngefomathi yevidiyo, kufuneka uthenge imakrofoni, ikhamera yewebhu, i-headphones, ilaptop okanye ikhompyuter.Ukuba akunakwenzeka ukusebenzisa ikhamera yewebhu, ngoko unxibelelwano lunokwenzeka kwifomathi yombhalo, ngamanye amazwi, ncokola nje.
Ewe, akukho nto inokutshintsha incoko yevidiyo.Apha kubonakala ngathi unxibelelwano lwenzeka ngokwenene.Kwaye incoko inethuba lokuba abantu abaninzi banxibelelane ngaxeshanye.Umzekelo, iMultichat inamandla anjalo.
Yintoni eqhelekileyo phakathi kwevidiyo yencoko ephilayo kunye ne-Video chat roulette?
Ukuncokola ngevidiyolithuba elikhethekileyo lokuba nencoko nomntu okanye abantu abangahlali kude kangako, kodwa neekhilomitha ezininzi kude.Ekuqaleni konxibelelwano, akukho mntu waziyo ukuba luhlobo luni lomntu abaza kuhlangana nalo kwincoko.Kodwa unokuqwalasela ezinye iiparamitha zokukhangela: isini, ubudala, ilizwe.Ngexesha elifanayo, unxibelelwano lwenzeka kwifomathi yamahhala.
Ukuze uqalise ukuqhagamshelana nomnye umntu, kufuneka ungene kwingxoxo enomdla, uvule ikhamera yewebhu, kwaye i-roulette iya kuthatha i-interlocutor engahleliwe.
Incoko yevidiyo asiyoncokonje ephilayo.Ngokuqhelekileyo abantu bafumana iqabane lomphefumlo wabo apha.Ukukhangela okunjalo, ungasebenzisa i-Intanethi.I-roulette yethu iya kuthatha indawo yayo nayiphi na indawo yokuthandana, kwaye akuyi kufuneka uhlawule nantoni na.Ukongeza, ngexesha lonxibelelwano, ukuba umntu uyayithanda, unokutshintshisa oonxibelelwano kunye naye: iinethiwekhi zentlalo, iSkype, inombolo yefowuni, ezinye iindlela zokunxibelelana.Kwaye emva koko, zombini ubuhlobo kunye nomhla, umtshato unokwenzeka.
Ukukhangela unxibelelwano, awuyi kuzisola ngokuba uze kwingxoxo yethu.Emva kwayo yonke loo nto, senze ezona zixhobo zihlaziyiweyo zonxibelelwano.
I-roulette yengxoxo engaziwa, eRashiya 17+
Eyona app ilungileyo yokuncokola kwi-intanethi engachazwanga eqokelele abantu abangama-25,000,000+ ukufumana abahlobo abatsha kunye nokuthandana.
Thetha nabantu ongabazi ngayo nantoni na.Yenza abahlobo abatsha, buza imibuzo.Yabelana ngeemfihlo okanye ubulale nje ixesha.Akukho mntu uya kukugweba kuba akukho mntu uya kukwazi ukuba ungubani!
Iimpawu ezichasayo ze-app:⁃ akukho magama⁃ akukho mbali⁃ akukho ntengiso⁃ akukho ntlawulo⁃ akukho spam⁃ akukho robhothi⁃ akukho bungozi
I-AntiLand yinkonzo yomyalezo obhaliweyo ekhuselekileyo, engaziwa.Idatha yakho yobuqu ayigcinwa okanye kwabelwana ngayo, ke akukho mntu unokufumanisa igama lakho okanye inombolo yefowuni.Kukho izinto ezimbini kuphela ezenza ukuba wahluke: i-avatar yakho ethandekayo kunye nentetho yakho.
Yonke imiyalezo ekumagumbi okuncokola ifihliwe ngokukhuselekileyo kwaye izicime ngokwayo.Kuphela yimiyalezo engama-50 yokugqibela eseleyo kwincoko nganye.Lumka ungaphoswa libali elipholileyo okanye ifoto ebeka esichengeni.
AKUKHO ENTENGEZELO, AKUKHO Intlawulo
I-AntiLand ayibonisi ntengiso.Ngaphezu koko, le ncoko i-100% yasimahla: akukho mnikelo okanye ukuthengwa kwe-app.
Sisebenza ngononophelo ukuqinisekisa ukuba unxibelelwano lwakho kwincoko lufanelekile.Ngoko ke, size nenkqubo ekhethekileyo yokuchasana nogaxekile kunye nenkqubo yokuchasana nezikhukhula.Iqaphela abagaxekile kwaye ayibafaneleki kwinethiwekhi yoluntu.
Zonke iincoko zethu zizinyaswa kuphela ngabantu abaphilayo kwi-intanethi.Dibana nabafana abahle, amantombazana angatshatanga kunye nolutsha olunobuhlobo.Thetha nabantu, hayi bots.
I-AntiLand yenzelwe ulutsha kunye nabantu abadala.Uhluzo lwethu oluzenzekelayo lwe-analytics luyimodareyitha yonke isicatshulwa kunye neefoto ukugcina iingxoxo zikhuselekile ekuhlaleni.Ukongeza, wonke umsebenzisi osebenzayo unokujoyina iqela lethu elikhula ngokukhawuleza le-admins ukwenza imithetho emitsha kunye nokulawula ucwangco.
Umsebenzisi ngamnye unokurhuma kwi-Super Power ebanika iinketho ezinje:- ukufikelela kwii-avatars ezithandekayo ezingaphezu kwe-100- izikhundla eziphezulu zeengxoxo zakho zabucala kuluhlu lwabanye abasebenzisi- ngokuphindwe kabini karma kumyalezo ngamnye othunyelweyo- ukukwazi ukukhetha umbala wemiyalezo yakho- ukuqaqambisa iprofayile kwiincoko- ulawulo lwesimo se-intanethi- inkxaso yeprimiyamuUbhaliso oluhlaziyekayo.Kukho izicwangciso ezimbini ezikhoyo: inyanga ye-1, iinyanga ezili-12.Ungaphuma nangaliphi na ixesha.Intlawulo iya kuhlawulwa kwi-akhawunti yakho ye-iTunes xa uqinisekisa ukuthenga.Umrhumo wakho uya kuhlaziya ngokuzenzekelayo ngaphandle kokuba uyawurhoxisa ubuncinci iiyure ezingama-24 phambi kokuphela kwexesha langoku.Isixa sentlawulo elandelayo siya kutsalwa kwiiyure ezingama-24 phambi kokuphela kwexesha langoku.Ungalawula umrhumo wakho kwi-iTunes yefowuni yakho kunye neesetingi ze-App Store.
Yintoni chatroulette ngokweenkcukacha
Namhlanje, abaninzi banengxaki yokunxibelelana.Oku kungenxa yokuba abaninzi abanalo ixesha lokuthandana.Abantu bazama ukwakha umsebenzi, ukuxazulula iingxaki ezahlukeneyo, okanye nje abazi ukuba bangaqala njani incoko enomdla nomntu ongamaziyo kwaye baziveze kwicala elifanelekileyo.Nangona kunjalo, ingxaki yonxibelelwano ingasonjululwa ngokukhawuleza.Chatroulette ngumncedisi wokuqala kule.Olu luhlobo olulolunye lokunxibelelana kwiintanethi zentlalo nabahlobo kunye nobathandayo.
I-Chatroulette ayikho kuphela malunga nethuba lokwandisa isangqa sabahlobo ngamaxesha.Kule meko, umntu ufunda ukuziphatha ngokuchanekileyo kwiimeko ezingaqhelekanga kunye nokunxibelelana nabantu abahlukeneyo ngobudala, imbono yehlabathi, inqanaba lengeniso, umdla, kunye nokunye.Amava anokuba nomdla kakhulu kwaye achulumancise.Oku malunga nokuphuma kwindawo yakho yokuthuthuzela kunye nethuba lokutyhila ngokupheleleyo amandla akho kunxibelelwano.Apha akusayi kuphinda kukwazi ukusebenzisa amabinzana asemgangathweni kwaye ubambelele kwii-algorithms ezimiselweyo.
I-Chatroulette lunxibelelwano oluphilayo usebenzisa ikhamera yewebhu.Kule meko, abangeneleli babonana kwaye banxibelelana ngokuthe ngqo.Nangona kunjalo, kuyenzeka ukuba unxibelelane ngencoko yokubhaliweyo okanye iaudio.Wonke umntu unelungelo lokuzikhethela.Abantu bahlala bewela kwii-interlocutors ezingahleliwe.Abasoze bazi ukuba ngubani ozakwenza naye incoko ngokulandelayo.Iyamangalisa into yokuba inokuba ngummelwane okanye umntu osuka kwelinye ilizwe.Ungayishiya incoko nanini na ukuba kukho into engayithandiyo okanye engahambanga kakuhle.Kwixesha elizayo, akuyi kuba nzima ukufumana elinye iqabane incoko.
Inkqubo iqinisekisa ukuba abathathi-nxaxheba abangakhethiyo abaziphindi.Ithuba lokuhlangana kwakhona lincinci kakhulu.Yingakho unokuziphatha ngokuvulekileyo kwaye ngokwemvelo.Nangona kunjalo, ukuba unqwenela, kunokwenzeka ukongeza i-interlocutor njengomhlobo ukuba wayebonakala enomdla kwaye kukho umnqweno wokuqhubeka uqhelana.
I-Chatroulette akaziwa.Abasebenzisi banokulindela umda ophezulu wabucala.Unganxibelelana ngaphandle kwentlawulo kwaye kwimowudi "yokungayeki".Awudingi kukhuphela nantoni na.Khawuleza uphuhlise izakhono zakho zonxibelelwano kwaye ufumane abangeneleli abanomdla ngokwenene kwi-intanethi.
I-Chat Roulette yingxoxo yevidiyo ekuvumela ukuba unxibelelane ngokungaziwa nabanye abasebenzisi nge-Android.Ngokungafaniyo nezicelo ezininzi ezifanayo, inkqubo ayifuni ukuba ubophe iidilesi ze-imeyile okanye iinombolo zefowuni.Itsala ingqalelo yabasebenzisi kunye nokungabikho kwesidingo sokuza negama lokugqitha kunye nokungena, kunye nerejista.Ekuphela kwento oyifunayo ukuze uqalise luqhagamshelo lwe-intanethi oluzinzileyo.
Ukuqalisa ngencoko yevidiyo uya kufuna:
Qalisa isicelo, ukuvumela ukufikelela kwimakrofoni kunye nekhamera ye-selfie kwi-Android, ngoncedo lwengxoxo eyenziwayo.
Vula incoko kwaye uthethe okanye uncokole nomntu okhethwe ngokuzenzekelayo.
Ukhetho lwenziwa ngokungakhethiyo, lithethelela ngokupheleleyo igama lesicelo.Abantu ababini badibanisa omnye nomnye, kwaye ujongano lwenkqubo yeChatRoulette yahlulwe ngesiqingatha ngokuthe nkqo.Umfanekiso ovela kwikhamera yangaphambili ye-interlocutor ibonakala kwindawo ephezulu yesikrini, kwisiqingatha esisezantsi kukho ifestile encinci kunye nomfanekiso oboniswe yikhamera ye-selfie yomsebenzisi.Ukuba abathathi-nxaxheba kwincoko abazange bathandane okanye ubuncinane omnye wabo akakho kwimeko yokunxibelelana, ingxoxo yevidiyo isetyenzisiwe ngokulula, emva koko ukukhangela i-interlocutor entsha iqala.
Phakathi kweenzuzo eziphambili zeChatRoulette kulula ukuyisebenzisa - awudingi ukufunda imiyalelo ukuze usebenze neprogram.Isicelo sisimahla, ngaphandle kwezithintelo ekusebenzeni.Amanye amanqaku amahle:
Iinketho ezininzi zokwenza ngokwezifiso, kubandakanya ukutshintsha (ukunciphisa okanye ukwandisa) ubungakanani befestile kunye nokuguqula umfanekiso.
Umsebenzi wokuthumela imiyalezo ebhaliweyo kwi-interlocutor.
Gqibezela ukungaziwa.I-Chatroulette ye-Android ayikuvumeli ukuba ufumane ulwazi malunga nomsebenzisi, kuquka igama, inombolo yefowuni, kunye nendawo yokuhlala.Abangeneleli banxibelelana ngolwazi omnye komnye ukuba umnqweno onjalo uvela.
Ithuba lokunxibelelana nabantu abavela kulo naliphi na ilizwe emhlabeni.
Ngaphandle kokungaziwa, inkqubo ibonelela ngokhuseleko oluthile kubathathi-nxaxheba.Ukuthotyelwa kwemigaqo kuhlolwa ubusuku nemini ngabamodareyitha, abanokukhalaza ngokuphulwa kwemithetho: izithuko, izibonelelo ezingafanelekanga, ubukrwada okanye izoyikiso.Abasebenzisi abathobela umthetho banokuzibonakalisa okungenamkhawulo.
Uyakwazi ukukhuphela Chat Roulette Android simahla kwikhonkco ngqo ngezantsi.